Bit By Bit - tijaabo Orodka - Hawlaha
[ , ] Berinsky iyo asxaabtiisaba (2012) qiimeeyeen MTurk qayb ahaan iyaga oo ku celceliyay saddex tijaabo oo caadi ah. Tijaabi tijaabooyinka tijaabada ah ee Cudurka Asaasiga ah ee Asiya ( Tversky and Kahneman (1981) . Natiijadaada ma ka dhigeysaa Tversky iyo Kahneman? Natiijooyinkaadu ma waxay u dhigantaa kuwa Berinsky iyo asxaabtooda? Maxaa-haddii wax -yani-muu baraan sida loo isticmaalo MTurk ee tijaabooyinka sahan?
[ , ] Warqad yar oo ku qoran luqad lagu magacaabo "We Have to Break", oo ah cilmu-nafsiga bulshada ee cilmiga bulshada Robert Cialdini, oo ka mid ah qorayaasha Schultz et al. (2007) , wuxuu qoray in uu horay uga fariistay shaqadiisa isagoo ah borofisar, qayb ahaan sababtoo ah caqabadaha uu la kulmay tijaabooyinka goobaha anshaxa (cilmi nafsiga) oo badanaa sameeya tijaabooyinka shaybaadhka (Cialdini 2009) . Akhri Cialdini's warqad, oo u qor email isaga ku boorinaya inuu dib u eego jebinkiisa iyadoo loo eegayo suurtagalnimada tijaabooyinka digital. Isticmaal tusaalooyin gaar ah oo cilmi baaris ah oo wax ka qabta cabashooyinka
[ ] Si loo go'aamiyo in guusha ugu horeysa ee bilawga ah ay dhacdo, van de Rijt iyo asxaabtana (2014) soo dhex galaan afar nidaam oo kala duwan oo ku guuleysta guusha kaqeybgalayaasha xulashadooda, kadibna waxay qiyaaseen saamaynta fog ee guushaas ku-meel-gaadhka ah. Miyaad ka fikiri kartaa nidaamyo kale oo aad ku fulin karto tijaabooyin isku mid ah? Qiimee nidaamyada marka la eego arrimaha qiimaha sayniska, algorithmic confounding (eeg cutubka 2), iyo anshaxa.
[ , ] Natiijooyinka tijaabada waxay ku xirnaan karaan ka qaybgalayaasha. Samee tijaabo ka dibna ku dheji MTurk adigoo isticmaalaya laba istaraatijiyadood oo qoran oo kala duwan. Isku day inaad tijaabiso tijaabada iyo tabaha qorista si aad natiijooyinka u noqoto mid ka duwan sida ugu macquulsan. Tusaale ahaan, istiraatiijiyadaha qorista ayaa noqon kara inaad soo qorto ka qaybgalayaasha subaxda iyo fiidka ama si ay uga qaybgalayaashu u helaan mushahar sareeya. Noocyada noocyada kala duwan ee istaraatijiyeynta qorista waxay keeni karaan barkado kala duwan oo kaqeybgalayaasha iyo natiijooyin tijaabo ah oo kala duwan. Sidee ayuu natiijooyinkaaga u kala duwanyahay? Maxay taasi muujinaysaa tijaabooyinka tijaabada ah ee MTurk?
[ , , ] Bal qiyaas in aad qorsheyneysid tijaabooyinka shucuurta niyadeed (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Isticmaal natiijooyinka daraasad hore u fiirso Kramer (2012) si loo go'aamiyo tirada ka qaybgalayaasha xaalad kasta. Labadan daraasadood ma aysan si fiican u ciyaarin si aad u hubso inaad si cad u qorto dhammaan fikradaha aad sameysid:
Samee jilitaan oo go'aamin doona inta kaqeybgalayaasha loo baahan yahay si loo ogaado saameynta sida weyn ee saameynta Kramer (2012) leh \_(\_alpha = 0.05\_) iyo \_(1 - \_beta = 0.8\_) .
Samee isla xisaabtan la mid ah.
Marka la eego natiijooyinka ka soo baxa Kramer (2012) ahayd naqshad niyadjab (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) oo awood badan (sida, ma ka qaybgalayaasha ka badan intii loo baahnaa)?
Qodobada aad ka dhigtay, ee leh saameynta ugu weyn ee xisaabintaada?
[ , , ] Ka jawaab su'aasha hore mar labaad, laakiin waqtigan halkii aad ka isticmaali lahayd daraasad hore ee kormeerka by Kramer (2012) , u isticmaal natiijooyinka tijaabo dabiiciga hore ee ay sameeyeen Lorenzo Coviello et al. (2014) .
[ ] Labada Margetts et al. (2011) iyo van de Rijt et al. (2014) waxay tijaabiyeen tijaabooyin iyagoo baranaya habka dadka saxiixaya codsi. Isbarbardhigaan oo kala soocaan naqshadaha iyo helitaanka daraasaddan.
[ ] Dwyer, Maki, and Rothman (2015) sameeyeen labo tijaabo oo ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya caadooyinka bulsho iyo dabeecadda deegaanka ah. Waa kuwan soo socda:
"Sidee loo isticmaali karaa sayniska cilmi nafsi ahaaneed si loogu dhiirigeliyo habdhaqanka habdhaqanka? Labo daraasadood, waxqabadyo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo dabeecadaha ilaalinta tamarta ee muqaalka guud ayaa baaray saamaynta sharuudaha sharaxa iyo mas'uuliyadda shakhsiyeed. Daraasada 1, xaaladda iftiinka (sida, banaanka ama bannaanka) ayaa lagu maamulay ka hor inta qofna galin musqulaha dadweynaha oo aan qarsoodi ahayn, oo tilmaamaya xeerka sharaxaadda ee goobtaas. Ka qaybqaatayaashu waxay si aad ah ugu dhowdahay inay iftiimiyaan iftiinka haddii ay joogeen markii ay soo galeen. Daraasada 2aad, xaalad dheeraad ah ayaa lagu daray kuwaas oo caadada ah in la iftiiminayo iftiinka uu soo bandhigay isku-duwaha, laakiin ka qaybqaatayaashu iskama qaadin inay u soo jeestaan. Mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed waxay u adeegsadeen saameynta nidaamyada bulshada ee dabeecadda; marka ay ka qaybgalayaashu aysan mas'uul ka ahayn inay iftiimiyaan iftiinka, saameynta xeerka ayaa yaraaday. Natiijooyinkani waxay tilmaamayaan sida caadooyinka sharraxaadda iyo masuuliyada shakhsi ahaaneed ay xakameyn karaan wax ku oolnimada waxqabadyada xeeldheer. "
Akhri wargeysyadooda iyo naqshadeynta dib-u-eegista daraasadda 1.
[ , ] Dhisida su'aashii hore, hadda samee naqshaddaada.
Sidee ayay natiijooyinka isbarbardhigaan?
Maxay kala sharixi karaan khilaafyadan?
[ ] Waxaa jiray doodo muhiim ah oo ku saabsan tijaabooyinka isticmaalaya kaqeybgalayaasha laga soo qaatay MTurk. Marka la barbardhigo, waxaa sidoo kale jiray doodo muhiim ah oo ku saabsan tijaabooyinka isticmaalaya kaqeybgalayaasha ka soo jeeda dadka ardayga dhigta ee haysta shahaadada. Ku qor qoraallo laba-bog ah oo isbarbardhigaya Turkiga iyo kuwa ka soo horjeeda ee ka qaybgalayaasha cilmibaadhista. Isbarbardhigaaga waa in lagu daraa dood ku saabsan arrimaha sayniska iyo saadka.
[ ] Jim Manzi buugga " Uncontrolled" (2012) waa hordhac cajiib ah awoodda tijaabada ganacsiga. Buuggan wuxuu soo gudbiyay sheekadan soo socota:
"Markii aan la kulmay kulan la lahaa ganacsi dhab ah oo ganacsi, bilyaneer oo iskaa wax u qabso ah oo leh qoto dheer oo macquul ah oo ku saabsan awoodda tijaabooyinka. Shirkadiisu waxay ku qaadatay ilo muhiim ah oo isku dayaysa in ay abuurto bandhigyo daaqadeed oo waaweyn oo soo jiidasho leh oo soo jiidanaya macaamiisha oo kordhiya iibka, maaddaama xigmadda caadiga ah ay sheegtay inay tahay. Khubarada ayaa si taxaddar leh u tijaabiyay naqshadeynta ka dib qaabaynta, iyo kalfadhiyada dib-u-eegista shakhsiyadeed mudo sanado ah oo aan lagu muujineynin saameyn muhiim ah oo kasta oo naqshadeynta muuqaal kasta ah ee iibka. Suuq geynta iyo ganacsatada baayacmushtarka ayaa la kulmay agaasimaha guud si ay dib ugu eegaan natiijooyinka imtixaanka taariikheed ee taariikhda. Ka dib markii ay soo bandhigeen dhammaan xogta tijaabada ah, waxay ku soo gabagaboobeen in xigmadda caadiga ah ay khaldan tahay - sawirada daaqadda ma iibinayaan iibka. Tallaabooyinkooda lagu taliyay waxay ahayd in la yareeyo kharashka iyo dadaalka aaggan. Tani waxay si weyn u muujisay awoodda tijaabinta si ay u rogto xikmadda caadiga ah. Jawaabtii CEO-ku wuxuu ahaa mid fudud: 'gabagabadayda ayaa ah in naqshadayaashu aysan fiicnayn.' Xalku wuxuu ahaa in la kordhiyo dadaalka loogu talagalay naqshadeynta dukaanka, iyo in dad cusub loo helo inay sameeyaan. " (Manzi 2012, 158–9)
Noocee sax ah ayaa ah walaaca CEOga?
[ ] Dhisida su'aashii hore, waxaad qiyaasi kartaa in aad joogtay kulanka halkaas oo natiijooyinka tijaabooyinka laga wada hadlay. Maxay yihiin afar su'aalood oo aad weydiisan kartid - hal nooc nooc kasta oo ansax ah (tirakoob, dhis, gudaha, iyo dibadaba)?
[ ] Bernedo, Ferraro, and Price (2014) daraaseynaya saameynta toddobada sano ah ee waxqabadyada biyaha lagu badbaadinayo ee lagu sharxay Ferraro, Miranda, and Price (2011) (eeg jaantuska 4.11). Warqaddan, Bernedo iyo asxaabtiisuba waxay sidoo kale raadinayeen inay fahmaan qaabka waxtarka leh ee isbarbardhigaya habdhaqanka qoysaska ee aan haysan ka dib marka daaweynta la soo gudbiyo. Taasi waa, qiyaas ahaan, waxay isku dayeen in ay arkaan haddii daaweynta ay saameysay guriga ama mulkiilaha.
Akhri waraaqda, sharax naqshadahooda, kuna soo koobaan natiijooyinkooda.
Miyuu natiijooyinkoodu saameyn ku yeeshaan sida aad u qiimeynayso qiimaha-wax-ku-oolnimada waxqabadyada la midka ah? Haddii ay sidaas tahay, maxaa sabab? Haddii aysan ahayn, maxaa sababay?
[ ] Dabagal ku socota Schultz et al. (2007) , Schultz iyo asxaabtu waxay sameeyeen taxane ah saddex tijaabo ah oo ku saabsan saamaynta sharraxaad iyo sharraxaad ku saabsan dabeecadaha deegaanka (dib loo isticmaalay) laba jeer oo isku xiran (hudheel iyo qolka iskeelka guryaha) (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) .
Soo koobso naqshadda iyo natiijooyinka saddexdan tijaabadood.
Sidee, haddiiba, ma waxay bedelayaan tarjumaadda Schultz et al. (2007) ?
[ ] Iyadoo laga jawaabayo Schultz et al. (2007) , Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) ayaa isku dayey in ay tijaabiyaan tijaabooyin shaybaar oo isku mid ah si ay u bartaan naqshadeynta biilasha korantada. Waa kuwan sida ay u sharraxan yihiin abstract:
"Daraasad ku salaysan daraasadda, kaqaybgale kasta wuxuu arkey biilka korontada korontada ee qooyska leh isticmaalka korontada oo aad u sarreeya, isagoo ka hadlaya macluumaadka (a) isticmaalka taariikhda, (b) isbarbardhigga deriska, iyo (c) isticmaalka taariikheed ee qalabka korontada. Ka qaybgalayaashu waxay arkeen dhammaan noocyada macluumaadka mid ka mid ah saddexda nooc ee ay ku jiraan (a) miisaska, (b) garaafyada baraha, iyo c. Waxaanu ka warbixinnaa saddexda natiijadood ee ugu muhiimsan. Marka hore, macmiilayaasha waxay fahmeen nooc kasta oo ah isticmaalka korontada inta ugu badan marka la soo bandhigay miiska, laga yaabee in miisaanku fududeeyo akhrinta dhibic fudud. Marka labaad, doorbidinta iyo ujeedada korantada korontada ayaa ah midka ugu xoogan taariikhda isticmaalka taariikheed, oo ka madaxbannaan qaabka. Saddexaad, shakhsiyaadka leh qoraallada tamarta yar waxay fahmeen dhammaan macluumaadka yar. "
Si ka duwan daraasadaha kale ee dabagalka ah, natiijada ugu weyn ee danta Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) ayaa lagu soo warramey akhlaaqda, ma aha anshax dhab ah. Maxay yihiin awooda iyo tabar darrida noocan ah ee daraasadda ee barnaamijka cilmi baarista ah ee kor u qaadista kaydka tamarta?
[ , ] Smith and Pell (2003) soo bandhigeen maaro-cilmi-baaris ku salaysan daraasad muujinaysa waxtarka paraha. Waxay soo gabagabeeyeen:
"Sida waxqabadyo badan oo loogu talagalay inay ka hortagaan caafimaadka jirada, waxtarka paraha ma ahan kuwo lagu qiimeeyay qiimeyn adag iyadoo la isticmaalayo tijaabooyin la xakameeyey. Udoodaha caddaynta ku saleysan caddayntu waxay dhaleecaynayaan qaadashada waxqabadyada la qiimeeyay iyadoo la isticmaalayo xogta kaliya ee la socoshada. Waxaan u maleyneynaa in qof walbaa faa'iido u yeelan karo haddii ilbiriqsiyada xagjirka ah ee caddaynta caddaynta ku salaysan ay abaabulaan oo ay ka qaybqaataan indhoole indhoole ah oo la xakameynayo, xakameynaya, xakameynaya, maxkamadaynta wareega ee parahaska
Ku qor qoraallada ku habboon wargeyska guud ee akhriska, sida New York Times , oo ka doodaya daba-galinta caddaynta tijaabada ah. Bixiyaan tusaalooyin gaar ah, oo qeexan. Tilmaamo: Fiiri Deaton (2010) iyo Bothwell et al. (2016) .
[ , , ] Qiyaasaha kala duwan ee qiyaasaha saameynta daaweynta waxay noqon kartaa mid ka badan tan qiyaasaha farqiga u dhexeeya. Qor warqad u qori injineernimo oo ka masuul ah imtixaanka A / B ee shirkad warbaahineed oo bilawga ah kaas oo sharxaya qiimaha kala duwanaanta kala duwanaanta ee ku saabsan tijaabada internetka. Qoraalku waa inuu ku jiraa bayaan ku saabsan dhibaatada, qaar ka mid ah suurtagalnimada ku saabsan shuruudaha kala duwan ee qiyaasaha isbeddelka isbeddelku ka soo bixi doonaan qiyaasaha farqiga u dhexeeya, iyo daraasad sahlan oo sahlan.
[ , ] Gary Loveman wuxuu ahaa borofisar ka tirsan Dugsiga Ganacsiga Harvard ka hor inta uusan noqonin Maamulaha Harrah, mid ka mid ah shirkadaha ugu casayn ee adduunka. Markii uu u soo guuray Harrassa, Loveman wuxuu u beddelay shirkadda barnaamijka daacadnimo ee sida joogtada ah oo soo ururiyay xog badan oo ku saabsan dabeecada macaamiisha. Marka la eego nidaamka cabbirada had iyo jeer, shirkaddu waxay bilowday inay tijaabiso tijaabooyinka. Tusaale ahaan, waxay tijaabin karaan tijaabo si ay u qiimeeyaan saameynta kuuboon loogu talagalay habeenkii hotelka oo bilaash ah macaamiisha leh qaab khamaar khaas ah. Halkan waa sida Loveman uu sharaxay muhiimadda ay leedahay tijaabinta dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ah ee Harrah:
"Waa sida aadan u dhibin haweenka, adigu waxba ha xadin, waana inaad leedahay koox kantarool ah. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aad ka lumi karto shaqadaada Harrari-maaha koox maamusha. " (Manzi 2012, 146)
Qor email u dir shaqaale cusub oo sharraxaya sababta Loveman uu u maleynayo inay aad muhiim u tahay in koox koox la koontaroolo. Waa inaad isku daydaa inaad ku darto tusaal ahaan - mid dhab ah ama samee-si aad u muujiso dhibkaaga.
[ , ] Ujeedo tijaabo ah oo cusub oo lagu qiyaaso saameynta helitaanka fariinta qoraalka ee xasuusinta tallaalka. Boqolkiiba konton iyo konton kiliinikadood, mid kasta oo leh 600 bukaan oo u qalma, ayaa diyaar u ah inay ka qaybqaataan. Waxaa jira qiimo go'an oo ah $ 100 kiliinig kasta oo aad rabto in aad la shaqeyso, oo kharashkana waa $ 1 fariin qoraal ah oo aad rabto inaad dirto. Dheeraad ah, xarumo kasta oo aad la shaqeyneyso waxay cabiraysaa natiijada (haddii qof uu helay talaal) bilaash ah. Ka fikir inaad haysato miisaaniyad $ 1,000.
Xaaladahee ayaa laga yaabaa inay ka fiicnaadaan in ay xooga saaraan khayraadkaaga tiro yar oo rugo caafimaad ah iyo xaaladahee laga yaabo in ay ka fiicnaadaan in ay si ballaaran u faafaan?
Arimahee ayaa ogaan doona cabbirka ugu yar ee saameeya ee aad awoodi kartid inaad ku kalsoonaato miisaaniyaddaada?
Qoraan warqad u sharraxaya ganacsiyadan ganacsiyada leh.
[ , ] Dhibaatada ugu weyn ee koorsooyinka internetka waa ciil-qabsi: arday badan oo bilaaba koorsooyinka ayaa dhammaadkii sii deynaya. Bal qiyaas in aad ka shaqeyneyso barxad barasho internet ah, iyo naqshadeeyaha baraha ayaa abuuray muuqaal horumarsan oo muuqaal ah oo ay u maleeyneyso in ay ka caawineyso in ardaydu ka joojiyaan waxbarashada. Waxaad dooneysaa inaad tijaabiso saameynta barmaamijka horumarka ardayda oo ku jira koorsada sayniska ee culuumta bulshada. Ka dib markaad wax ka qabato arimaha anshaxeed ee laga yaabo inay ka soo baxaan tijaabooyinka, adiga iyo saaxiibadaa waxay ka walwalsan yihiin in koorsadu aysan heli karin arday ku filan si loo hubiyo saameynta hiddaha horumarka. Xisaabaadka soo socda, waxaad u maleyneysaa in kala badh ardayda ay heli doonaan barashada horumarka iyo badhka ah. Dheeraad ah, waxaad u maleyn kartaa in aysan jirin wax faragelin ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u maleyn kartaa in ka-qaybgalayaashu kaliya ay saameeyaan haddii ay heleen daaweynta ama xakamaynta; Waxba kama qabtaan haddii dad kale ay heleen daaweynta ama xakamaynta (si qeexan oo rasmi ah, fiiri cutubka 8 ee Gerber and Green (2012) ). Hayso qadarin kasta oo dheeraad ah oo aad sameyso.
U sheeg in miiska horumarka la filayo inuu kordhiyo saamiga ardayda dhammaadka fasalka 1 dhibcood; Waa maxay cabbirka saamiga looga baahan yahay si loo hubiyo saameynta?
U sheeg in miiska horumarka la filayo in uu kordhiyo saamiga ardayda fasalka ku dhameynaya 10 dhibcood; Waa maxay cabbirka saamiga looga baahan yahay si loo hubiyo saameynta?
Hadda ka feker inaad tijaabiso tijaabinta, iyo ardayda dhamaysay qalabka koorsada ayaa qaatay imtixaan kama dambays ah. Markaad isbarbardhigto dhibcaha imtixaanka ugu dambeeyay ee ardayda heshay barashada horukaca leh dhibcaha kuwa aan haysan, waxaad ku aragtaa, wax badan oo aad ka yaabsan tahay, ardayda aan helin barashada horumarka ayaa dhab ahaantii dhalisay. Tani macnaheedu ma'aha in mashaariicdani ay sababeen ardayda inay wax ka bartaan? Maxaad ka baran kartaa macluumaadkan natiijada? (Tilmaamaha: Eeg cutubka 7 ee Gerber and Green (2012) )
[ , , ] Bal qiyaas in aad ka shaqeyneysid aqoonyahan cilmi ah oo ku saabsan shirkad tiknoolaji ah. Qof ka mid ah waaxda suuq-geynta ayaa kaa codsanaya caawimadaada qiimeynta tijaabada ah ee ay qorsheynayaan si loo qiyaaso soo-celinta maalgashiga (ROI) ee loogu talagalay olole cusub oo internetka ah. ROI waxaa lagu qeexay faa'iidada saafiga ah ee ololaha ka qaybqaata kharashka ololaha. Tusaale ahaan, olole aan saameyn ku laheyn iibka wuxuu yeelanayaa ROI -100%; olole ay faa'iido u tahay in ay la mid tahay kharashka ROI ee 0; iyo olole ay faa'iido u abuurtay laba jibbaar qiimaha ROI ee 200%.
Ka hor inta aan la bilaabin tijaabinta, waaxda suuq-geynta ayaa ku siineysa xogtan soo socota ee ku salaysan baaritaankooda hore (xaqiiqda, qiimahaasi waa mid ka mid ah ololayaasha dhabta ah ee internetka laga soo sheegay ee Lewis iyo Rao (2015) ):
Caddadka celceliska ee macaamiisha ah wuxuu raacayaa qayb-caadi ah oo caadi ah oo leh $ 7 iyo qiimaha $ 75.
Ololaha waxaa la filayaa inuu kordhiyo iibka $ 0.35 halkii macaamil, taas oo u dhiganta korodhka faa'iido ee $ 0.175 qofkiiba.
Tirada tijaabada ah ee la qorsheeyey waa 200,000 oo qof: kala badh kooxda daaweynta iyo kala badh kooxda kooxda xakamaynta.
Qiimaha ololaha waa $ 0.14 qofkiiba.
ROI la filayo ololaha waa 25% [ \_((0.175 - 0.14)/0.14\_) ]. Haddii si kale loo dhigo, waaxda suuq-geynta ayaa aaminsan in mid waliba 100 doolar oo lagu iibsado suuq-geynta, shirkaddu waxay heli doontaa $ 25 dheeraad ah oo faa'iido leh.
Qoro warqad xasuus ah tijaabinta tijaabadan. Qoraalkaaga waa inuu isticmaalaa caddayn siman oo aad abuurayso, waana inuu ka hadlaa laba arrimood oo waaweyn: (1) Ma kugula talin lahayd samaynta tijaabadan sida qorshaysan? Haddii ay sidaas tahay, maxaa sabab? Haddii aysan ahayn, maxaa sababay? U hubso inaad u caddaato shuruudaha aad isticmaalaysid si aad u sameyso go'aankan. (2) Cabbiraad noocee ah ayaad ku talin lahayd tijaabadan? Mar labaad fadlan hubso inaad si cad u qeexdo shuruudaha aad isticmaalaysid si aad u sameyso go'aankan.
Qoraal fiican ayaa wax ka qaban doona kiiskan gaarka ah; xasuusin fiican ayaa ka soo kicin doona kiiskan hal dhinac (tusaale ahaan, tus sida sida go'aanka u beddelayo shaqadiisu tahay xajmiga saameynta ololaha); iyo xasuus weyn ayaa soo bandhigi doona natiijo dhamaystiran. Qoraalkaaga waa inuu isticmaalaa garaafyada si uu u caawiyo muujinta natiijooyinkaaga.
Halkan waxaa ah laba tilmaamo. Marka hore, waaxda suuq-geynta ayaa laga yaabaa in ay ku siiso macluumaad aan loo baahnayn, waxayna ku fashileen inay ku siiyaan macluumaadka lagama maarmaanka ah. Marka labaad, haddii aad isticmaalayso R, ogow in hawsha rlnorm () aysan shaqeynin sida dad badani filayaan.
Hawlgalkani wuxuu ku siin doonaa inaad ku tababarato falanqaynta awoodda, sameynta jilayaasha, iyo inaad la xiriirto natiijooyinkaaga erayada iyo garaafyada. Waa inay kaa caawisaa inaad sameyso falanqaynta awooda ee nooc kasta oo tijaabo ah, ma aha oo kaliya tijaabooyin loogu talagalay in lagu qiyaaso ROI. Hawlgalkani wuxuu u maleynayaa in aad leedahay khibrad aad la leedahay imtixaanka xisaabinta iyo falanqaynta awooda. Haddii aanad aqoon u lahayn falanqaynta awoodda, waxaan kugula talinayaa in aad akhriso "A Power Primer" by Cohen (1992) .
Nashaadkan waxaa soo saaray qoraal cajiib ah RA Lewis and Rao (2015) , taas oo si muuqata u muujinaysa xaddidida aasaasiga ah ee tirakoobka xitaa tijaabooyin waaweyn. Waraaqooda - oo markii hore lahaa cinwaankii ugu dambeeyay ee "Dhaqdhaqaaqa ugu dhow ee Qiyaasta Soo Celinta Muuqaalka" - wuxuu qeexayaa sida ay u adag tahay in la cabbiro soo celinta maalgelinta xayeysiisyada internetka, xitaa tijaabooyinka dijitalka ah ee ku lug leh malaayiin macaamiisha ah. Guud ahaan, RA Lewis and Rao (2015) muujinayaan xaqiiqda tirakoobka aasaasiga ah ee muhiimka u ah tijaabooyinka da '-da': waa adag tahay in la qiyaaso saameynta daaweynta yaryar iyadoo la raacayo xogta natiijada.
[ , ] Sidii la mid ah su'aasha hore, laakiin, halkii laga jilicsan lahaa, waa inaad isticmaashaa natiijooyinka falanqaynta ah.
[ , , ] Isla la mid ah su'aashii hore, laakiin isticmaal labada natiijooyin siman iyo natiijooyinka falanqaynta.
[ , , ] Bal qiyaas in aad ku qorneyd warqadda kor ku xusan, iyo qof ka socda waaxda suuq-geynta ayaa bixiya hal gabal oo macluumaad cusub ah: waxay rajeynayaan in la isku daro 0.4 oo u dhexeeya iibka ka hor iyo kadib tijaabada. Sidee tani u badashaa talooyinka ku qoran warqadaada? (Tilmaam: eeg qaybta 4.6.2 oo dheeraad ah oo ku saabsan farqiga udhexeeya qiyaasaha iyo qiyaasaha farqiga u dhaxeeya.)
[ , ] Si loo qiimeeyo wax-ku-oolnimada barnaamijka kaalmada shaqo-ku-saleysan ee web-ka, jaamacaddu waxay samaysay tijaabo kontorool ah oo la kala sooco oo ka mid ah 10,000 oo arday oo gelaya sanadka ugu dambeeya ee dugsiga. Diiwaangelinta bilaashka ah ee macluumaadka gaarka ah ee macluumaadka ayaa la soo diray iyada oo loo marayo casumaad gaar ah oo loo diro 5,000 oo arday oo arday ah, iyada oo 5,000 oo arday oo kale ay ku jireen kooxda kantaroolka oo aysan haysan rukumo. Laba iyo toban bilood ka dib, baaritaan dabagal ah (oo aan wax jawaab ah bixin) ayaa muujisay in labada kooxood ee daaweynta iyo kontoroolka, 70% ardaydu waxay heleen shaqo waqti buuxa ah oo ay doorteen oo ay doorteen (miiska 4.6). Sidaa darteed, waxay u egtahay in adeegga ku saleysan webka uusan lahayn wax saameyn ah.
Si kastaba ha ahaatee, aqoon yahan cilmi ah oo jaamacadeed ayaa jaamacada fiiriyay xogta si kooban uguna eegtey in kaliya 20% ardayda ka tirsan kooxda daaweyntu ay weligood galaan koontada ka dib markay helaan emailka. Dheeraad ah, iyo waxoogaa la yaab leh, kuwa ka mid ah boggaga internetka, 60% oo keliya ayaa shaqeeyay shaqo waqti buuxa ah oo ay ka doorteen beertooda, taas oo ka hooseeyay tirada dadka aan gashaneyn oo ka hooseeyay heerka dadka xaalada xakamaynta (miiska 4.7).
Sii sharaxaad ka bixi waxa dhici lahaa.
Maxay yihiin laba siyaabood oo kala duwan oo lagu xisaabinayo saameynta daaweynta ee tijaabadan?
Marka la eego natiijadan, waa inay bixiyaan adeeggan dhammaan ardayda? Si aad u caddaato, tani ma aha su "aal ah jawaab fudud.
Maxay tahay inay sameeyaan xiga?
TIXRAAC: Su'aashani waxay ka baxsan tahay maaddada ku jirta cutubkan, laakiin waxay ka hadlaysaa arimaha guud ee tijaabooyinka. Nooca qaabaynta tijaabada ah waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa naqshad dhiirrigelin ah sababta oo ah kaqaybgalayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay ku hawlanaadaan daaweynta. Dhibaatadani waxay tusaale u tahay waxa loo yaqaan " non-complianceed" (eeg cutubka 5 ee Gerber and Green (2012) ).
[ ] Ka dib imtixaanka dheeraadka ah, waxay soo baxday in tijaabooyinka lagu sharraxay su'aashii hore ay xitaa ka sii xumaatay. Waxaa loo soo jeestay in 10% dadka ku jira kooxaha gacanta ku haya si ay u hellaan adeega, waxayna ku dhammaadeen heerka shaqada 65% (miiska 4.8).
Qor email ku soo koobaya waxa aad u malaynayso inay dhacayaan oo kugula talinayaan maaddo ficil.
TIXRAAC: Su'aashani waxay ka baxsan tahay maaddada ku jirta cutubkan, laakiin waxay ka hadlaysaa arimaha guud ee tijaabooyinka. Dhibaatadani waxay tusaale u tahay waxa loogu yeero laba-dhinac oo aan ku habboonayn (eeg cutubka 6aad ee Gerber and Green (2012) ).
Jaantuska 4.6: Eegida Dhacdooyinka Nidaamka ah ee ka soo baxa Imtixaanka Adeegyada Shaqada
Helitaanka shabakadda internetka 5,000 70%
Looma helin helitaanka shabakadda 5,000 70%
Jaantus 4.7: Fiirfiirin Dheeraad ah ee Macluumaadka laga helay Tijaabada Adeegyada Xirfadda
Helitaanka galitaanka website-ka iyo ku galey 1,000 60%
Helitaanka shabakadda internetka oo aan marnaba galin 4,000 72.5%
Jaantuska 4.8: Dakhliga Buuxa ee Xogta laga helay Imtixaanka Adeegyada Xirfadda
Looma helin helitaanka shabakadda internetka oo lacagtiisa bixiyay 500 65%
Looma helin helitaanka shabakadda internetka mana bixin wax lacag ah 4,500 70.56%